रोज्नुहोस् सम्पादन - एक्सचेन्ज डाटाबेस
उदाहरणका लागि, यदि तपाईँंले एउटा ठेगाना डाटाबेस बाट एउटा फारम चिठ्ठीमा ठेगाना फाँटहरू घुसाउदै हुनुहुन्छ भने, तपाईँंले बिभिन्न ठेगानाहरू घुसाउनलाई त्यसपछी डाटाबेसलाई अन्य ठेगाना डाटाबेस सँग साट्न न सक्नुहुन्छ।
यो संवादमा तपाईँं एउटा डाटाबेस मात्र परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ.
हालै प्रयोग भैरहेका डाटाबेसहरूलाई सूचीकृत गर्दछ। हालको कागजातमा कम्तिमा एउटा डेटा फाँट, सूचीको हरेक डाटाबेसहरूबाट सम्मिलित भएको हुन्छ।
डाटाबेस फाइल (*.odb) चयन गर्नलाई एउटा फाइल खुला संवाद खोल्दछ। चयन गरिएको फाइल उपलब्ध डाटाबेस सूचीमा थप हुन्छ।
डाटाबेस एक्सचेन्ज गर्न:
निश्चित गर्नुहोस् कि दुबै डाटाबेसहरूले मिल्दो फाँट नामहरू र फाँट प्रकारहरू समावेश गर्दछ.
कागजात क्लिक गर्नुहोस् जुन तपाईँं डेटा स्रोत परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ.
प्रयोग गरिने डाटाबेसहरू सूची मा,तपाईँले बदल्न चाहेको डाटाबेस तालिका चयन गर्नुहोस् ।
उपलब्ध डाटाबेसहरू सूचीमा, बदल डाटाबेस तालिका चयन गर्नुहोस्.
Title is: अदल-बदल डाटाबेस